Barnaamijka horudhaca - Söderhamns kommun Gamla Webben
| Dugsiga sare
| Barnaamijka horudhaca
Barnaamijyada Hordhac waa kuwa aan heysanin waxbarashada dugsiga sare. Waxaa jira shan barnaamijyo oo hordhaca ah in ay ardayda diyaarin doonaa waxbarashada dugsiga sare oo loogu talogalay shaqada ama tababar kasta sida diyaarinta Course (impre) ama tababar.
Barnaamijka oo lagu beegsanayo doorashada shakhsi
Fursado gaar ah
Su'aalaha iyo jawaabaha caadiga ah Ee ardeyda dhigata dugsiga sare ee Staffangymnaiset IM-barnaamij:
Ardeyga: waxaan joogaa guriga marka fasalka ey ka socdaan hawlaha. Ma jecli run ahaantii hawlaha dugsiga?
Jawaab: maalmaha ciyaaraha iyo howlaha kale ee uu dugsiga abaabulay waa qasab in aad joogtid.
Ardega: Waxaan doortaa inaan keli shaqeeyo marka ay ardeyda wada shaqaynayaan. Si fiican ayaan u jeclahay sidaas?
Jawaab: Shaqada dugsiga waa in la wada shaqeeyo isla markaasna waa inuu ka qeyb qaataa ardeyga.
Ardeyga: Waxaa doonayaa iney gabdhaha kiligooda cayaraan?
Jawaab: Ardeyda fasallada wiilal iyo gabdho si wadajir ah ayey isboortiga u wada cayaarayaan sida dabaasha kubadda iwm.
Ardeyga: Ma ciyaari karo waxaa i xaanuunaayo lugta waxaan soo iloobay dharkii isboortiga / manaka qeyb qaadan karo jimicsiga karo?
Jawaab: Waa in had iyo jeer aadaa hoolka isboortiga oo aad u sheegto maclinkaada isboortiga.
Ardeyga: Sharcigee quseeya ka qeybqaadashada xisooyinka?
Jawaab: Mar walba waa in aad ka qayb qaadato xisooyinka. Marka aad soo daaheyso ama aad baxeyso waqtiga oo dhaamaan waxaa had iyo jeer u sheegeysaa macalinkaada.
Ardeyga: Sharci matahay in fasalka dhexdiisa ku isticmaalo telefanka?
Jawaab: Macalikaada ayaa go'aaminaayo in aad isticmaali karto telefoonka ama in aad isticmaali karin.
Ardeyga: Goormaa heli karaa shahaadad?
Jawaab: Waxbarashada IMSPR waxey leedahay heerar kala duwan. Gabi ahaanba wadanka kuwa ku cusub waxey bilaabayaan Slussen oo ah heerka 1, akhri 3 sannad dugsiyeed. Heerka 2 akhri SVA in fasalka 6aad iyo heerka 3, arki SVA in ay fasalka 9. Waxaad heli kartaa oo keliya fasalka ka mid ah SVA haddii aad ka akhrisan gool oo ka mid ah Fasalka 9 heerka 3 . waxaad ka heli kartaa fasalada xisaabta, Ingiriisiga, farshaxanka iyo afka hooyo haddii aad ka akhriso ujeedooyinka fasalka 9 haddii aad u tagto koox heer kale oo ka badan 3.
Ardeyga: Goormaa la iga badalayaa galaaska?
Jawaab: Heerka badlida waxaa kiliya uu dhacaa dhamaadka sanad dugsiyeedka. Ardayga sida uu wax u barto iyo inta maado uu ku guuleystay ayaa la qeymeeyaa kadib ayaa la bedelaa.
Ardeyga: Goormaan bilaabayaa barnaamijyada qaranka?
Jawaab: Waxaad ka raadsan kartaa barnaamijka qaran, xirfadeed, marka aad leedahay ogolaansho oo aad heysataa shahaado cadeynaya inaad ku soo baastay 8 maado,iyo la eego waxbarashadaada 12ka fasaladood, ma jirto damaanad ah in aad ka hesho boos, barnaamij kaasna waxaad kala hadli kartaa latalyaha xaga xirfadaha.
Ardeyga: Muddo intee la eg ayaan u tegi karaa IM?
Jawaab: Waxaad ku tegi kartaa ilaa aad 20 sano ka buuxiso.
Ardeyga: hadii aan heysanin shahaado goormaan dhameynayaa maxaase dhacayaa markaas?
Jawaab: daraasaad kaaga iyo Latalyahaaga xaga xirfadaha ayaa ku siinaya macluumaadkaada si wanaagsan kuu wargelinaaya.
Ardega: Xagee ayaa la xariirayaa marka walaac i heystoku saabsan mutqbalkeyga iyo qorshaha waxbarashada?
Jawaab: Laga yaabaa inaad waqti kasta inta lagu jiro waqtiga aad soo joogtay IM la xiriir xafiiska daraasaadka iyo lataliyaha xifadaha.
Ardega: Goormaa ayaan heli karaa CSN?
Jawaab: Si toos ayaad u heli kartaa CSN haddii aad leedahay ruqsadda degenaanshada iyo wax barasho wakhti buuxa, hadii aad laheyn wax daqli ah waxaad codsan kartaa lacago dheeraad ah waxaana waajib ah in aad kiligaaga raadsato si aad u hesho lacagta CSNka waa inaad xaadirtaa 100%, waxaa laga yabaa in aad dib u soo celiso hadii uu maqnaashaadu badnaado.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka horudhaca ee luqadaada.
Filmka: Cusub ee Sweden 1
Filmka: Cusub ee Sweden 2
Filimka: Cusub ee Sweden 3
Filmka: Cusub ee Sweden 4